AKHRISO: Bayaanka Midowga Afrika ee soo afjray Rajadii Muddo kororsiga 2-da sano ee Maxamed Farmaajo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa go’aan cad ka qaatay kuddo kordhinta Aqalka hoose ee Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha iyo Baarlamaanka, iadoo ku tilmaamay tallaabo wiiqeyso midnimada, xasilloonida dalka, geeddi socodka dimoqraadiyadda curdunka ah ee Soomaaliya.
Bayaanka oo ka koobnaa 14 qodob ayaa dhinacyada Soomaalida lagu booriyey inay dib u bilaabaan wadahadalkii Doorashooinka oo lagu saleynayo Heshiiskii 17 September 2020; waxana Guddoomiyaha Midowga Afrika laga dlbaday inuu magacaabo Ergey Sare oo dhex dhexaadiya dhinacyada isku haya xaaladda Soomaaliya.
HOOS KA AKHRISO QODOBADDA BAYAANKA GOLAHA AMNIGA MIDOWGA AFRIKA
1. Golaha wuxuu muujinaysaa walaac weyn oo ku saabsan ficillada kalida ah ee Golaha Shacabka Soomaaliya uu ku dhaqaaqay 12-kii Abriil 2021, ee ku saabsanaa meel marinta qaraar uu saxiixay Madaxweynaha 13-kii Abriil 2021-kii, kaasoo meesha ka saaraya heshiiskii 17-kii Sebtember-2020 ee qaababka loo marayo qabashada doorashooyinka Soomaaliya;
2. Wuxuu cambaareynayaa ficilladii 12-kii Apriil 2021 ee Golaha Shacabku, ay ku kordhiyeen waqtiga Madaxweynaha iyo Baarlamaanka, iyadoo dib loogu dhigay doorashooyinka, taasoo wiiqaysa midnimada iyo xasilloonida dalka, geeddi-socodka dimoqraadiyadda iyo dastuurka ee curdanka ah. waxay khatar gelineysaa nabadgelyada iyo nabadgelyada, iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii la soo dhaafay iyada oo taageero ka heleysa Midowga Afrika iyo saaxiibada kale oo naf-hurnimada sameeyay;
3. Intaa waxaa dheer oo walaac qoto dheer laga muujiyey saameynta ay ku yeelan karto xaalada siyaasadeed ee haatan jirta iyo saameynta ay ku yeelan karto isku xirnaanshaha federaalka Soomaaliya, midnimada ciidamada Soomaaliya iyo laamaha amniga, hanaanka abuuritaanka xoog iyo awooda lagu sii wadi karo la-dagaalanka Al Shabaab;
4. In kasta oo aan qirayno in Heshiiskii Sebtember 2020 uu ka dhashay wadahadal ay Soomaali leedahay oo horseed u ahayd dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo hoggaamiyeyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka (FMS), iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka, baahida loo qabo in la qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, iyo in Soomaaliya aysan awood u lahayn inay hirgeliso doorasho hal qof iyo hal cod ah sannadka 2020/21; wuxuu Golaha mar kale xaqiijinayaa in Heshiisku uu weli yahay aasaaska iyo waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in Soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, daah-furnaan iyo kalsooni leh;
5. Wuxuu ku boorrinayaa hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya inay mudnaanta siiyaan danaha qaranka iyo in si deg-deg ah dib loogu billaabo wadahadalka, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Sebtember 2020 iyo talooyinka guddiga farsamada ee Baydhabo, lana raadinayo xal is-afgarad ah oo laga gaaro arrimaha taagan ee caqabadda ku ah qabanqaabada doorashooyinka;
6. Waxaa loogu baaqayaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasada Soomaaliya inay is xakameeyaan oo ay ka waantoobaan ficil kasta oo keeni kara xiisad sii kororta oo sii wiiqda xasilloonida Soomaaliya, gobolka Geeska Afrika iyo Qaaradda;
7. Wuxuu hoosta ka xarriiqayaa baahida loo qabo in daneeyayaasha Soomaaliyeed ay qaataan wadahadal loo dhan yahay oo hubinaya ka-qaybgalka haweenka iyo dhallinyarada;
8. Waxaan dib-u-adkeynayaa sida ay lagama maarmaanka u tahay isu-tanaasul siyaasadeed iyo la-tashiyo sal ballaaran, iyo sidoo kale kusoo noqoshada wadahadal hufan iyo wadatashi guud oo laga yeesho daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya, oo ay ku jiraan DFS iyo FMS; waxayna taasi caddeyneysaa diyaar ahaanshaha Midowga Afrika inay taageerto geeddi-socodka wada-hadalladaas iyada oo loo marayo fududeyn iyo dhexdhexaadin, taas oo tilmaamaysa habab cusub oo lagu gaari karo is-afgarad ku saabsan qaababka doorashooyinka iyo jadwal shaqeyn kara;
9. Sidaas awgeed waxaan ka codsaneynaa Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu si degdeg ah u magacaabo una diro Soomaaliya, Wakiil Sare oo ah Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya, si uu ula shaqeeyo dhinacyada iyo daneeyayaasha kale ee ay khuseyso, isagoo taageeraya Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga iyo Madaxa AMISOM, si loo gaaro tanaasul la isla oggol yahay, iyo in warbixin lagu siiyo Golaha afarta toddobaad ee soo socda gudahood;
10. Wuxuu hoosta ka xarriiqayaa baahida loo qabo in dhinacyada Soomaaliyeed ay ku wadahadlaan niyad wanaag iyagoo raadinaya heshiis u oggolaanaya qabashada doorashooyinka isla markaana abuuraya jawi xasiloon oo loo dhan yahay;
11. Wuxuu muujinayaa sida ay Midowga Afrika uga go’an tahay inay ka caawiyaan maamulada iyo daneeyayaasha Soomaaliya hirgelinta heshiis doorasho oo la isku oggol yahay, oo ay ka mid tahay in la geeyo howlgalka muddada dheer ee kaalmada doorashooyinka si loo taageero dadaallada lagu xaqiijinayo;
12. Waxay codsaneysaa AMISOM, inta laga cusboonaysiinayo waajibaadkeeda, inay la socoto dhaqdhaqaaqa Ciidamada Amniga ee Soomaaliya (SSF). Waxay ka codsaneysaa Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, inuu si deg deg ah u qabto shirarka Ciidamada iyo Wadamada Ciidamada Ku Biirinaya Booliska (T) / PCCs), heer safiirnimo, iyo sidoo kale Guddiga Isuduwaha Hawlaha Milatariga (MOCC) ee heerka Taliyeyaasha Difaaca, si loo tixgeliyo saameynta amniga ee cakirnaanta siyaasadeed ee hadda jirta, iyo sidoo kale khariidaynta xulashooyinka wax looga qabanayo;
13. Waxaa loogu baaqayaa IGAD iyo Beesha Caalamka, oo ay ku jiraan UN-ka iyo EU-da, iyo la-hawlgalayaasha kale ee muhiimka ah, inay sii wadaan la shaqaynta AU si dhinacyada Soomaalida loogu soo celiyo miiska wadahadalka iyo in laga caawiyo sidii nabad lagu gaari lahaa. heshiis siyaasadeed;
14. Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afria wuxuu go’aansaday inuu si firfircoon ula wareego arrinta.
HOO KA AKHRISO BAYAANKA
Click to access eng-psc-communique-993rd-meeting-on-somalia.22.04.2021.pdf
Bayaanka Midowga Afrika
Previous articleGolaha Amniga Midowga Afrika oo si kulul u Cambaareeyay Muddo kororsigii Farmaajo (Bayaan Culus)
Next articleDowladda Mareykanka oo sii xoojisay Go’aankii Midowga Afrika. “Madaxda Soomaalida waa inay si degdega..”